"Matetika marary sery. izay tokony hatao?"Ny valiny dia,!
ianao eto: Home Tips "Matetika marary sery. izay tokony hatao?"Ny valiny dia,!
Mbola kely isika rehetra mahalala marimarina mahafinaritra hatsiaka soritr'aretina: fiankohofana, hafanana, hatsiaka, mikohaka, Nanaintaina taolana sy ny hafa toy izany "ody". Olon-dehibe matetika tsy mahazo marary matetika, noho ny ankizy, nefa tsy afaka milaza, fa mora kokoa ny miaro an'i sery virosy sy ny aretina.
Ankehitriny isika dia hiresaka momba ny, ny fomba hisakanana ny tany am-boalohany fiverenan'ny ny aretina, rehefa tonga fotsiny ny fanasitranana. Fahasarotana - ny tena mahafinaritra ny ampahany amin'ny sery, satria afaka nampahatezitra ny miharatsy ny mitaiza aretina, ary hitondra any amin'ny fampandrosoana ny vaovao pathological ny taovan'ireo. Ao amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny sery sy gripa chiayte lahatsoratra eo amin'ny toerana – http://forcys.ru/article/chastye_prostudy_u_vzroslyh-74/.
toy izany, ny mety ho fahasarotana sy fiverenan'ilay aretina dia avo, raha:
rehefa ny aretina efa nihena hafanana - famantarana ny fihenan'ny amin'ny tena ny fiarovana sy ny tsimatimanota;
ianao marary ho an'ny intsony 7-10 andro, ary ny fanatsarana dia tsy maharitra;
Tsy niseho avy miaina;
kohaka mamolavola sy mitohy.
Raha ny fomba fitsaboana no nampiasa tsy voaporofo ny danja eo amin'ny fampiharana,, tsy maintsy hitsidika ny dokotera aloha. Angamba, na ao amin'ny raharaha tsy mahomby na dratsy fanomanana, ao ny ratsy fitsaboana regimens, na ny olana lalina ny kibonao.
naoty, toe-tsaina izay ihany koa ny manana fiantraikany lehibe indrindra eo amin'ny fanarenana haingana. Ny lafy ratsin-javatra kokoa ny anaty fanahy, ny malemy kokoa ny hery fanefitra. Koa, ny vatana mila sasatra tsara, raha tsy izany Izay ho maka ny hery miaro amin'ny aretina sy ny asa mahomby?
Fahasarotana ny sery mety ho otitis, sinusitis, traotraoka, pnemonia, sy ny fitsaboana na ireo toe-javatra mety hitaky zavatra bebe kokoa hery, noho ny fikarakarana momba ny fahasalamana mba hisorohana ny fampandrosoana ny fahasarotana.
Raha ny teny hoe "tena matetika marary sery, izay tokony hatao - tsy mahalala "ny momba anao, dingana lehibe tokony ho raisina avy hatrany ny ady sery. Hanampy vaovao Fortsis zava-mahadomelina - lozenges tamin'ny mahomby polyphenol sarotra.
Ireo akora dia nanarona virosy sy ny bakteria, aza avela azy ireo hifindra amin'ny, manakana fivoarana bebe kokoa ny aretina. Izany no mahatonga ny fahombiazan'ny Fortsis, raha oharina amin'ny zava-mahadomelina maro levitra, be ambony.
Fortsis hanampy anao hiaro ny tenanao sy olon-tiana avy amin'ny hatsiaka nandritra ny vanim-potoana ary manome hery ny ampahany amin'ny aretina haingana, raha ny aretina efa nitranga. Fortsis - maoderina fanafody ho an'ireo, izay te-hiaina tsy misy sery!